Uyini Umxhumanisi Wezokumaketha we-imeyili futhi Ngabe Ngiyayidinga?
ULwesithathu, April 28, 2010 NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 UScott Hardigree
Njengoba sonke sazi, ukumaketha nge-imeyili kuyasebenza ngakho ngeke ngikudine lolu lwazi. Esikhundleni salokho, ake sibheke ukuthi yini umxhumanisi wezentengiso we-imeyili nokuthi yini abangakwenzela yona.
Abaxhumanisi bokumaketha nge-imeyili ngokuvamile bathatha izinhlobo ezintathu, i Isikhungo Sokumaketha nge-imeyili, i-Freelancer, noma umuntu osebenza endlini ku-Email Service Provider (ESP) noma kwi-Traditional Agency; konke lokhu kunamakhono nesipiliyoni okukhethekile ekwakheni amasu wokuthengisa we-imeyili asebenzayo. Kodwa-ke, amakhono abo ayisisekelo neminikelo yesevisi iyahlukahluka kakhulu.
Ngakho-ke udinga umxhumanisi wokumaketha we-imeyili? Uma kunjalo, hlobo luni? Zibuze le mibuzo elandelayo.
Ngabe isixazululo sami sokuthumela singilungele?
Ngabe izixazululo zami ze-ESP noma zangaphakathi zinikeza zonke izici engizidingayo? Ngabe ngisebenzisa izici engizikhokhelayo? Kulula NGAMI ukuyisebenzisa? Ingabe ukungena kwami ​​kuhambisana nezindleko zami?
Ngabe ngidwebe imephu ukuthi yini okufanele ngiyithumele? Njengama-imeyili Wokwamukela, Izincwadi Zezindaba, ama-oda Ashiyiwe, ama-Promotions, nama-imeyili okuvuselela? Yini engilahlekile? Kukuphi ukuwohloka kokuxhumana kwe-imeyili?
Kufanele ngipose nini?
Ngabe kufanele ngisebenzise ulwazi olususelwa kuzenzo zomamukeli wami ukuthumela ama-imeyili, njengokulandwa kwephepha elimhlophe noma ukulahlwa kwenqola? Kuthiwani ngama-imeyili aqhutshwa usuku, njengabathengi beholide kuphela noma izikhumbuzo. Lithini ikhalenda lami lokuhlela lezincwadi zami zezindaba? Ngabe ngigcina umkhondo wama-imeyili wokukhangisa asetshenziswayo?
Iyini imithetho yami yebhizinisi?
Ngisithathile isinqumo sokuthi yini edala ukuthi kuthunyelwe umyalezo? Yini idatha edingekayo ukuxhasa umlayezo? Ingabe inqubo yokungenisa idatha kufanele ibe mathupha noma izenzekele? Yikuphi okuqukethwe okuthunyelwayo lapho kufinyelelwa kulezo zimo? Luthini uhlelo lwami olusuka kumagama nakwimigqa yezihloko? Ingabe kufanele ngikuxube? Yini okufanele ngiyihlole?
Yini imigomo yami?
Ngabe ngizibekele imigomo, efana nenombolo yokulandwayo, ukuthengisa, ukubhaliswa? Yini engihlela ukuyenza ukukhulisa uhlu lwami? Yini engingayenza ukunciphisa ukukhanga?
Yini izidingo zami zokubika?
Ngabe ngidinga ukubona okungaphezu kokuchofoza nje nokuvula ukuze ngithuthukise imiphumela yami futhi ngifakazele icala lami? Ngabe ngidinga ukuthepha kwami ​​kwimininingwane engaphandle enjengeCRM kanye newebhusayithi analytics Amathuluzi okusungula nokulandela amamethrikhi wami wempumelelo?
Ukumaketha nge-imeyili kuyinto ebalulekile kubathengisi abaningi, kepha inqubo ingaba yinselele futhi idle isikhathi. Umxhumanisi we-imeyili wokuthengisa noma i-ejensi ingakusiza ufeze izinhloso zakho ngenkathi ikuvumela ukuthi usebenzise isikhathi sakho ukwenza ezinye izici zebhizinisi lakho.
Udinga okungaphezu kokuqonda nje? I-ejensi egxile ku-imeyili nayo ingahlinzeka ngezinsizakalo ezisekelayo, kanye nokuqondisa, okudingeka ukwethula nokuxhasa uhlelo oluqinile lokuthengisa nge-imeyili; funda kanjani-ukuqasha i-ejensi yokuthengisa ye-imeyili ukuze ufunde kabanzi.
Tags: umxhumanisi we-imeyiliimeyili MarketingUmxhumanisi Wezokumaketha nge-imeyili
I-Google Webmaster Central Ithola Ukuthuthuka Okukhulu